Sakafo heterotrofika: toetra, karazany ary zavamiaina | Green Renewable
Portillo Alemanina | 08/09/2021 19:10 | Tontolo_iainana
Amin'izao tontolo izao dia misy karazana sakafo mahavelona. ny heterotrofika sakafo Izy io dia iray amin'ireo zavamananaina izay tsy manana ny fahaizany mamokatra sakafo ho azy manokana ary ny angovo dia tsy maintsy ampidirina avy amin'ny fihinanana fitambarana organika toy ny tavy biby sy zavamaniry. Misy karazany maro ny sakafo mahavelom-boahary sy biby manana an'io.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra sy fiasa ary zavamananaina rehetra izay ananan'ny heterotrofika sakafo.
2 Rafitra fihinana heterotrofika
3 Ny maha-zava-dehibe ny sakafo maha-heterotrofika
3.1 Sakafo holozoika
3.2 Sakafo saprophytic
Ny herin'ny zavamiaina miaraka amin'ny Ny fihinana heterotrofika dia avy amin'ny fihinanana fitambarana organika, toy ny sela ho an'ny biby na zavamaniry.
Ohatra, ny bitro mihinana salady dia manana an'ity karazan-tsakafo ity satria avy amin'ny loharano ivelany no ahazoany ny sakafony. Toy ny liona mihinana antilopa. Mifanohitra amin'izany kosa, ny zavamaniry, ahidrano ary zavamananaina hafa dia zavamananaina autotrophic satria afaka manao ny sakafony manokana izy ireo.
Amin'io lafiny io, rehefa voahodina sy novaina ho singa tsotra kokoa ireo singa lanina, dia mahazo otrikaina ireo zavamananaina heterotrofika. Ireo dia tototry ny vatana ary ampiasaina amin'ny fizotran'ny metabolika samihafa.
Ny loharanon'ny angovo azo avy amin'ny heterotrophic dia samy hafa. Noho izany dia antsoina ireo zavamiaina mandany fangaro matevina sy ranoka holozoic, ary ny zavamiaina izay mihinana zavatra simba dia antsoina hoe zavamiaina saprophytes. Misy koa katsentsitra, izay miaina amin'ny vola lanin'ny host.
Rafitra fihinana heterotrofika
Ireo zavamiaina misy sakafo maha-heterotrofika dia tsy manao ny sakafony. Ao amin'ny rojom-pisakafoanana dia sokajiana ho mpanjifa izy ireo, satria ny angovo rehetra ho an'ny dingana lehibe dia avy amin'ny fihinanana sakafo, na avy amin'ny legioma na avy amin'ny biby. Noho izany, ny mpanjifa lehibe, toy ny bitro sy omby, dia mihinana mivantana amin'ireo mpamokatra solontenan'ny zavamaniry. Mikasika ny mpanjifa faharoa, fantatra koa amin'ny hoe karnavora, dia mihaza sy mihinana mpanjifa voalohany na ahitra izy ireo.
Raha miresaka evolisiona dia biby manana sakafo maha-heterotrofika dia niatrika fanovana anatomika sy morfolojika, izay namela azy ireo hifanaraka amin'ny sakafo isan-karazany laniny. Ireo dia mety ahitana na inona na inona manomboka amin'ny legioma malefaka, toy ny salady sy ny ahitra, hatramin'ny akorandriaka sy taolana. Ary koa, misy fahasamihafana eo amin'ny tahan'ny fibre, tavy ary proteinina.
Ohatra, amin'ny gorila dia mipoitra eo ambonin'ny valanorano ambony ny valanorano ambany, izay antsoina hoe protrusion mandibular. Ary koa, io dia manana tendrontany sagittal tena miavaka amin'ny karan-doha. Ireo endrika taolana ireo no fototry ny hozatra matanjaka mifandray amin'ny valanoranony, mamela azy hanapaka, hikororoka ary hikororoka sakafo.
Ny fiovan'ny morphological hafa dia mitranga ao amin'ny vavony. Ny vavonin'ireo tsiranoka toy ny ondry, omby, serfa ary osy dia manana ampahany efatra: rumen, harato, vavony ary abomasum, fa ny olombelona dia manana lava-bava ihany.
Ao amin'ny sakafo maha-heterotrofika dia misy loharanom-tsakafo marobe. Ny biby sasany mihinana legioma (herbivora), ny sasany mihinana biby (karnivora), ary ny sasany afaka mihinana roa tonta miaraka amin'ny fotoana iray. Na izany aza, ny sakafon'ny heterotrofika biby dia voakasiky ny anton-javatra maro, ao anatin'izany ny sakafo be sy ny fiovan'ny vanim-potoana.
Ny maha-zava-dehibe ny sakafo maha-heterotrofika
Ny zavamiaina sasany miaraka amin'ny sakafo maha-heterotrofika dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny natiora. Mifandraika amin'izany, ny holatra saprophytic dia manampy amin'ny fahasimbana akora maty amin'ny singa tsotra kokoa. Manamora kokoa ny zavamaniry akaikin'ireo holatra ireo ny mifoka otrikaina simba.
Ireo zavamananaina hafa izay mandray anjara amin'ny tontolo iainana dia bakteria saprophytic. Noho ny vokany amin'ny fitaovana isan-karazany dia antsoina hoe decomposera lehibe indrindra amin'ny natiora izy ireo. Manararaotra ny fahaizan'ny bakteria mahery koa ny olombelona. Noho izany dia ampiasainy izy ireo handravana ireo zavatra biolojika ary hamadika azy ho zezika, avy eo ampiasaina ho zezika hampiroborobo ny fitomboan'ny zavamaniry.
Ny sakafo ara-tsakafo holozoika dia karazana otrikaina izay atelina ny zavamananaina amin'ny sakafo misy ranoka sy mateza, izay zakaina amin'ny rafi-pandevonan-kanina. Amin'izany fomba izany, ny zavatra biolojika dia mivoaka ho molekiola tsotsotra kokoa, izay atin'ny tenan'ny vatana.
Ohatra, ny proteinina ao anaty hena dia navadika ho asidra amine ary lasa ampahany amin'ny selan'olombelona. Aorian'io dingana io dia esorina ny otrikaina, ao anatin'izany ny rano, ary ny sisa tavela dia esorina amin'ny vatana.
Ity karazan-tsakafo heterotrofika ity dia singa iray mampiavaka ny olombelona, ​​biby ary zavamananaina manana sela tokana (toy ny amoebas). Ireto no zavamananaina manome an'ity sakafo ity:
Herbivores: ireo biby mamorona an'ity sokajy ity dia mihinana zavamaniry indrindra. Ao amin'ny sehatry ny sakafo dia heverina ho mpanjifa lehibe izy ireo. Ho fanampin'izany, izy ireo dia azo sokajiana amin'ny fomba samihafa arakaraka ny karazana loharanom-pambolena nohaniny. Ahitana omby, bitro, zirafra, serfa, ondry, panda, hipopotama, elefanta ary llamas, ny ahitra.
Carnivores: Ny mpihinana hena dia mahazo angovo sy izay ilainy ara-tsakafo rehetra amin'ny fihinanan-kena (amin'ny alàlan'ny predation na amin'ny fihinanana carrion). Amin'ny tranga sasany dia afaka mivelona tanteraka amin'ny hena izy io, ka izany no mahatonga azy io heverina ho henjana henjana na tena zanak'omby. Na izany aza, afaka mihinana legioma kely ianao indraindray, saingy tsy afaka mandevona azy ireo amin'ny fomba mandaitra ny rafi-pandevonan-kanina. Ao amin'ity vondrona ity dia misy liona, hyena, tigra, coyote ary voromahery.
Omnivores: ny biby izay mihinana zavamaniry sy biby dia tafiditra ao anatin'io sokajy io. Maromaro izy ireo ary manararaotra, ny làlam-pandevonan-kanina dia afaka manodina ny legioma sy ny hena, na dia tsy mifanentana loatra aza ny fanodinana tsara ny sasany amin'ireo akora misy ao anatin'ny sakafo roa. Ohatra sasany amin'ity vondrona ity ny olombelona, ​​kisoa, goaika, rakikira, piranhas ary bera, ankoatry ny bera polara sy panda.
Ny sakafo mahazatra saprophytic dia iray izay maty sy loharanon-karena simba ny sakafo. Amin'ireny dia mahazo angovo izy ireo hanatanterahana ny asany lehibe. Ao amin'ity vondrona ity dia misy holatra sy bakteria sasany. Mba hamongorana ireo zavatra voadoka, ny saprophytes dia mamoaka anzima izay mihetsika amin'ny molekiola sarotra ary mamadika azy ireo ho singa tsotra kokoa. Ireo molekiola ireo dia entina ary ampiasaina ho loharanon'ny angovo ara-tsakafo.
Ity karazan-tsakafo ity dia mitaky fepetra manokana sasany hitrangany amin'ny fomba mandaitra. Anisan'izany ny tontolo iainana mando sy ny fisian'ny oxygen, na dia izany aza masirasira dia tsy mila izany ho an'ny sakafo metabolism. Ho fanampin'izany, ny pH an'ny mpanelanelana izay ahitana azy dia tsy maintsy miandany na somary asidra, ary ny hafanana dia tokony hafana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny sakafo heterotrofika amin'ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Sakafo ara-tsofotra